ဖားတုလို့ခရုခုန်….. အမေရိကန်ကိုတုလို့တရုတ်ကြီးက ခုန်အုံးမယ်တဲ့ဗျာ… | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Money & Finance » ဖားတုလို့ခရုခုန်….. အမေရိကန်ကိုတုလို့တရုတ်ကြီးက ခုန်အုံးမယ်တဲ့ဗျာ…
ဖားတုလို့ခရုခုန်….. အမေရိကန်ကိုတုလို့တရုတ်ကြီးက ခုန်အုံးမယ်တဲ့ဗျာ…
Posted by koyinmaung on Oct 23, 2011 in Money & Finance, News | 44 comments
အာဆီယံနိုင်ငံတွေနဲ့ တရုတ်နိုင်ငံကြားမှာ ကုန်သွယ်မှုတွေလုပ်တဲ့အခါ တရုတ်ယွမ်ငွေကို
တည်ငြိမ်ခိုင်မာတဲ့ ငွေကြေးအဖြစ် လုပ်ကိုင်ဖို့ သဘောတူညီချက်တစ်ခု ရလာအောင် လုပ်နေတယ်လို့
တရုတ်နိုင်ငံ နန်နင်းမြို့မှာကျင်းပတဲ့ အာဆီယံနဲ့ တရုတ်အစည်းအဝေးရဲ့ အပြင်ဆွေးနွေးပွဲမှ တရုတ်ပြည်သူ့ဘဏ်ရဲ့
လက်ထောက် အုပ်ချုပ်ရေးမှူး Jin Qi က ပြောခဲ့တယ်ဆိုဘဲ
တရုတ်နဲ့ အာဆီယံနိုင်ငံတွေမှာရှိကြတဲ့ ဘဏ်တွေကနေ ယွမ်ငွေကို အာဆီယံငွေကြေးအဖြစ် လဲလှယ်ပေးကြပါလိမ့်မယ်လို့ဆိုပါတယ်
ကမ္ဘာ့ငွေကြေး လဲလှယ်မှုမှာ အဓိကအခြေခံတဲ့ အမေရိကန်ဒေါ်လာရဲ့ ခိုင်မာမှုကို
စီးပွားရေး ဒုတိယအင်အား အကောင်းဆုံး တရုတ်ပြည်က ယွမ်ငွေနဲ့ ယှဉ်လာတဲ့သဘောဖြစ်ပါတယ် တဲ့ဗျာ
us ဒေါ်လာကိုတုလို့တရုတ်ကြီးတို့ကသူ့ယွမ်းငွေကို အာစီယံနိုင်ငံတွေပေါ်မှာစမ်းသုံးကြည့်မယ်ဆိုတော့
ကိုရင် မောင် has written 19 post in this Website..
View all posts by koyinmaung →
Mg Ni Tut says:
တရုတ်တိုးတက်လာတာ အရှေ့တိုင်းသားတစ်ယောက်အနေနဲ့ ၀မ်းသာချင်ရင် ၀မ်းသာလို့ရပါတယ်။
ဥရာပဘုံဈေးလို့ခေါ်တဲ့ အီးအီးစီ(EEC-European Economic Community) ကနေပြောင်းလိုက်တဲ့ အီးယူ(EU-European Union) ကသူ့ရဲ့ euro- ယူရိုငွေကြေးကို ၁၉၉၅ ဒီဇင်ဘာမှစတင်လက်ခံသုံးစွဲဘို့သဘောတူလက်ခံခဲ့ပေမဲ့ တကယ်တန်းစီးပွါးရေးဈေးကွက်ကိုစတင်ဝင်ရောက်နိုင်တာ၁၉၉၉ဇန်နဝါရီမှလို့ဆိုပါတယ်။
ဒေသတွင်းဆိုပေမဲ့ ဂလိုဘယ်ရွာကြီးမလို့ ဂလိုဘယ်ကြီးစီးပွါးရေးကိုမထိခိုက်ရအောင်လဲ အိုင်အမ်အဖ်ရဲ့ ထိန်းညှိမှုကလဲရှိမှာဆိုတော့။
တရုတ်ကြီးတောင် တုလို့ မရသေးလျင်..
ကျုပ်တို့ ဗမာ ပိုက်ပိုက် မည်သို့ ရှိမည်နည်း
မြန်မာငွေ ခိုင်မာအောင်ကော မည်သို့ လုပ်ကြမည်နည်း
တရုတ်ကြီး ဖင်ကျိုးတာ..ကျုပ်တို့ ကျိုးတာမဟုတ်ဘူး.
သူ့ သမိုင်းနဲ့ သူ..
ကျုပ်တို့ ဖင်မကျိုးအောင်သာ..ဘယ်လိုလုပ်မလဲ စဉ်းစား
FDA က အရာရှိကြီး
နန်နင်း ကို ရောက်နေတယ် သတင်းကြားတယ်ဗျ
ကိုပေါက်ဖော်ရေ…….. ခင်ဗျားကွန်မက် ၀ယ်မယ်ဗျို့ ….။ ဘယ်နှစ်ပွိုင့် ပေးရမလဲ…?
ကျုပ်တို့ ဖင်မကျိုးအောင် ဘာမှလုပ်လို့မရဘူးလေ ၊
ကျိုးဖို့ ရှိရင် ကျိုးမှာ ၊ စီးပွါးရေး လုပ်ငန်းရှင်ကြီးတွေ လုပ်သမျှ ခါးစည်းခံရမှာ ၊
တရုတ် တိုးတက်တာ အရှေ့တိုင်း ဆိုပေမဲ့ ဝမ်းမသာပါဘူး။
ဒီကောင်က ဖင်ခေါင်း ခပ်ကျယ်ကျယ်မှိူ့လို့။
စောင့်ကြည့်သေးတာပ။ တရုတ်နဲ့အာစီယံ အကြားကုန်သွယ်မှုတွေမှာ သုံးမယ်ဆိုတော့ သိပ်ဘောင်မကျယ်လို့ ဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်ပါလိမ့်မယ်။ မြန်မာ-တရုတ် နယ်စပ်ကုန်သွယ်ရေးမှာ ယွမ်ငွေကြေးနဲ့ပဲ ကုန်အရောင်းအဝယ် လုပ်တယ်ထင်၏။ တရုတ်အစိုးရကို ငွေကြေးတန်ဖိုး အမှန်အတိုင်းထားဖို့ အမေရိကန်နဲ့ ဥရောပအီးစီက ဝိုင်းဖိအားပေးနေတာကို မျက်ခြေမပျက်ကြဖို့တော့ လိုပါမယ်။ အနောက်ကမ္ဘာမှာ စီးပွားရေး ကျဆင်းမှု ရှည်ကြာလာတာနဲ့အမျှ တရုတ်ကြီးအပေါ် ဖိအားပေးမှုတွေ ပိုမိုများလာနေတယ်။
BRIC ဆိုပြီး.. အကောင်းဆုံး၎နိုင်ငံပေါင်းလို့.. ကမ္ဘာ့ငွေကြေးတခုလုပ်ဖို့တောင် အဆိုပြုခဲ့ကြသေးတာ.. မအောင်မြင်ခဲ့ပါဘူး..။ http://en.wikipedia.org/wiki/BRIC
BRICs may account for 41% of the world’s market capitalization
တရုတ်က.. ယူအက်စ်မြီရှင်.. ၁.၃ထရီလီယန်ဖိုး အစိုးရစာချုပ်တွေဝယ်ထားတာ.. ဒေါ်လာကိုသူ့ရဲ့..တကယ်စိတ်အရင်း.. အတွင်းထဲက…သတ်ချင်ပြိုင်ချင်စိတ်.. ထားမယ်မဟုတ်ဖူးလည်း ယူဆမိတာပဲ..။
ကိုပေါက်ဖော် ပြောတာ မှန်တယ်ဗျာ ကိုယ်တွေသာ ကြိုးစားကြရမှာ
China’s trade with Asean growing
China’s uneasy relationship with business neighbours
Stocks edge up on Eurozone hopes
Monday, 24 October 20
Nicolas Sarkozy tells David Cameron to ‘shut up’ in euro clash
Germany and France go some way towards détente, as Sarkozy targets the bulk of his anger at ‘interfering’ UK Prime Minister
By Rob Hastings and John Lichfield
David Cameron was givenavicious dressing down by French President, Nicolas Sarkozy, yesterday as tensions reached boiling point among European leaders arguing over how to save the euro.
Mr Sarkozy was reported to have told the British Prime Minister that he should “shut up” duringameeting of the European Union’s 27 leaders.
“We are sick of you criticising us and telling us what to do,” he was quoted as saying by EU officials, losing patience at what he perceived to be Mr Cameron’s hectoring from the single currency’s sidelines. “You say you hate the euro and now you want to interfere in our meetings.”
Data Point To Greater Fears Of Europe Recession
Business activity in Europe slowed this month toapace that few analysts expected, as fears over the global economy have dampened confidence and led to the first contraction for the euro zone’s service sector in two years.
Surveys showed that business activity in the euro zone’s service sector contracted in September for the first time in two years. The Flash euro zone composite for the Purchasing Managers’ Index (PMI) that is compiled by European research firm Markit Economics fell to 49.1 from 51.5 in August. Reuters reported that the reading came in below any estimate from the 37 analysts it had polled, all of whom expected the reading to remain above 50…
New export orders in Germany fell for the third month inarow, and at the fastest pace in2years. With Europe and the U.S. struggling to avoid recessions and China turning its economy inward to its own consumers,aslow-down in orders for German exports is expected. However the effects of the mounting fears about the global economic hot spots are difficult to predict….
European shares slip on US recession fears
Banking stocks among worst performers as political and legal tests threaten Europe’s efforts to resolve debt crisis.
European shares have fallen, extending their previous session slide on concerns that the United States could be heading towards recession following last week’s weaker-than-expected US non-farm payroll data.
Banking stocks on Monday featured heavily among the worst performers on the growth outlook concerns, with the STOXX Europe 600 Banks index down 2.6 per cent.
“Sentiment seems to be playingabig move in these market swings, nothing happened over the weekend to install investor confidence,” Mark Priest, senior equities trader at ETX Capital, said.
“There are concerns that growth is not what it is expected to be.”
At closing time, London’s FTSE 100 index of leading companies dropped 3.58 per cent to 5,102.58 points.
In Paris, the CAC 40 fell 4.73 per cent to 2,999.54 points and in Frankfurt the DAX plunged 5.28 per cent toatwo-year low at 5,246.18 points.
Mid-way through Latin American trading on Monday,the mani regional index fell 3.22 per cent and Mexico’s stocks fell 2.11 per cent following the European day’s losses.
Europe Debt, Recession Fear Upset Market
European stock markets fall heavily on fresh bailout and recession fears
• London’s FTSE 100 index closes down 3.5%
• Markets in Germany, France and Italy lose 5%
• Regional defeat for Merkel heightens debt crisis concerns
• IMF boss Christine Lagarde warns global economy on the brink
Angela Merkel has reportedly described the situation in Greece and Italy as ‘extremely fragile’. Photograph: Noor Khamis/Reuters
Stock markets fell heavily on Monday as fresh concerns about Europe’s debt crisis and evidence ofacontinent-wide drift towards recession prompted investor flight into assets perceived as risk free.
The value of the 100 leading shares on the London market fell by £49bn, extending the two day loss since the publication of poor American jobs figures last Friday to £82bn.
By the close of business in the City, the FTSE 100 index was down 189.45 points at 5102.58,adecline of 3.5%. Markets elsewhere in Europe suffered even bigger falls, with Germany’s Dax index of leading shares shedding more than 5%. France and Italy also saw share price falls of around 5%.
တစ်ခါလား ပြောကြဖူးပါတယ် ငြင်းကြဖူးပါတယ်..
ကိုယ်တွေတော့ မဟုတ်ပါဘူး.. သူတို့….
အမေရိကန်ဒေါ်လာကို ဘာကြောင့် နိုင်ငံတကာက ၀ိုင်းသုံးကြသလဲ ဆိုတော့ကာ…
ဟိုယခင်တွေကတောင် သတင်းတွေထွက်သေးတာဘဲ ရေနံဝယ်တာကို
တစ်ဖြေးဖြေးတော့သူကြိုးစားမှာပေါ့ ရသည်မရသည်က တစ်ကြောင်းသွားမှာ
လောလောဆယ် သူ့ငွေကြေးတွေလဲ ဖောင်းပွနေတာကတော့ စဉ်းစားစရာပဲ
ဖြစ်နိုင်ရင် ကျုပ်လည်း ကျုပ်ရဲ့ပုံနဲ့
အင်တာနေရှင်နယ် ယူနီဗာဆယ် စင်္ကြာဝဠာ သုံး ငွေစက္ကူတွေထုတ်ဝေလိုက်ခြင်သေးဒယ်
” ဒီကောင်က ဖင်ခေါင်း ခပ်ကျယ်ကျယ်မှိူ့လို့”…. “ဖားတုလို့ခရုကတော့ခုန် အင်….ဘယ်အိုင်တွေဒုက္ခရာက်ကြအုံးမလဲမသိတော့ပါ…”
2010 QE2 တွင် အမေရိကန်က ဒေါ်လာ ငွေစက်ကူသန်းပေါင်း၁.၂၅သန်း (၁,၂၅၀,၀၀၀ သန်း) ရိုက်ခဲ့ တယ်
နောက် ဆိုပြီး QE3 ထပ်ရိုက်ဘို့ဆွေးနွေးစဉ်းစား နေကြတယ်
၂၀၁၀ နိုဝင်ဘာလ မှာ ကျင်းပတဲ့ G20 တွင် အမေရိကန် ဩဇာ အတော်ကျ သွား တယ်
ယင်း ဆွေးနွေးပွဲမှာ တရုပ်ငွေ လဲ လှယ် နှန်းကို အကြပ်ကိုင်ဘို့ လုပ် တာ
တောင်ကိုရီးယာ နဲ့ဂျပန် တို့က သူ့အဆိုကိုသဘောမတူ နားမထောင် တော့ ပါ
တိုင်းပြည်တိုင်းလိုလို ကိုင်ထားမိတဲ့ ဒေါ်လာ တွေ ၂၀ % လောက် တန်ဘိုးကျ သွား တယ်
ဒေါ်လာ နဲ့ မြန်မာကျပ် လဲ လှယ် နှန်း လည်း ထိုးကျ လို့ မြန်မာ စီးပွါးရေး တော်တော်ဒုက်ခ ရောက်သွားတယ်
ယွန် ငွေကို အခြေခံပြီး ကုန်သွယ်ဘို့ ဒေသခံ နိုင်ငံတွေ က လုပ်လာ ကြတယ်
တောင်ကိုရီးယာ ယိုးဒယား တို့ ပါ ဝင်
President Obama Falls Short on G-20 Goals
Obama leaves G-20 empty-handed on currency spat
Failure to adopt U.S. stand underlines Washington’s reduced influence on international stage
Quantitative easing (QE) is an unconventional monetary policy used by central banks to stimulate the national economy when conventional monetary policy has become ineffective. A central bank buys financial assets to injectapre-determined quantity of money into the economy… QE1, QE2 and QE3
The expression “QE2” becamea“ubiquitous nickname” in 2010, usually used to refer toasecond round of quantitative easing by central banks. In retrospect, the round of quantitative easing preceding QE2 may be called “QE1”. Similarly, “QE3” refers to proposals for an additional round of quantitative easing following QE2.…(PROPOSALS FOR PRINTING MORE MONEY)
Quantitative easing has been nicknamed “printing money” by some members of the media, central bankers, and financial analysts. However, central banks state that the use of the newly created money is different in QE. With QE, the newly created money is used for buying government bonds or other financial assets, whereas the term “printing money” usually implies that the newly minted money is used to directly finance government deficits or pay off government debt (also known as “monetizing the government debt”).…
….In 2010, the Federal Reserve purchased $1.25 trillion of mortgage-backed securities (MBS) in order to support the sagging mortgage market. (PRINTED 1.25 TRILLION US DOLLARS) These purchases increased the monetary base inaway similar toapurchase of government securities.
“us ဒေါ်လာကိုတုလို့တရုတ်ကြီးတို့ကသူ့ယွမ်းငွေကို အာစီယံနိုင်ငံတွေပေါ်မှာစမ်းသုံးကြည့်မယ်ဆိုတော့
အမေရိကန်ကောင်းတာကို အတုယူတာ ကောင်းတာ ပေါ့နော်၊
သို့သော်၊…. အမေရိကန်မကောင်းတာကို အတုမယူတာဘဲ အရေးကြီးတယ်၊
စစ်အစိုးရ အဆက်ဆက်ကလဲ ဝါဇီကနေပြီး ငွေစက်ကူတွေ ဒလကြမ်း ထုတ် ခဲ့တယ်၊
တမတ်တန် မှိုးဟင်းခါး ကနေ ဘယ်နှစ်ကျပ် ဖြစ်သွား ပြီ လဲ?
ဝမ်းနဲစရာ ပါ ၊
ခုတလော အမေရိကန် က Q2 ဆို ပြီး (၁,၂၅၀,၀၀၀ သန်း) ဒေါ်လာ၊ဘိုး ငွေစက်ကူတွေ ဒလကြမ်း ထုတ် ခဲ့ တယ် လေ၊ ကြောက်ခ မန်းလိလိ ပါဘဲ၊
ဒါတွေကို အတုမယူတာဘဲ ကောင်းတာပေါ့ လေ၊ အ ထင်ကြီးစရာလဲ မလို ပါ ဘူး၊
အမေရိကန် လွှတ်တော်အမတ်တွေကလဲ ငွေရေးကြေးရေး နှင့်ပတ်သက်လို့ အကြီးအကျယ် ရန်ဖြစ် ငြင်းခုံနေကြ တယ်၊ အစိုးရ ထုတ် ငွေစုလက်မှတ် အဆင့်မြှင့်အတန်း ကနေ ချပစ်ခြင်းခံလိုက်ရတယ်လေ၊
အမေရိကန်လူထုကလဲ အထင်မကြီးပါ၊ New York, Chicago, Los Angeles စတဲ့မြို့ကြီးမှာ ဝိုင်းပြီး ခုနေ ဆန်ဒ ပြနေကြတယ်၊
အလုပ်ကို အရမ်း ကြိုးစားပြီး ချိုးခြံ ချွေတာ လို့ တိုးတက် အောင် မြင် လာ တဲ့ အာရှ နိုင်ငံ တွေ အချင်းချင်း ကို အထင် သေးစရာ မလိုပါ၊
အထူးသဖြင့် ကမ်ဘ ရာဇဝင် တခွင်မှာ ဒီလိုမျိုး အံ့ဩစရာကောင်းလောက်အောင် တိုးတက်တယ် ဆိုတာ မကြုံစဘူး ရယ်လို့ ပညာရှင်ကျွမ်းကျင်သူတို့က ချီးမွမ်း ခြင်းခံ ရတဲ့ တရုပ် ကြီး ကိုမှ သွားပြီး အထင်သေးစရာ မလိုပါ၊
ကောင်းတာ လေး တွေ ကိုအတုယူ ဘို့ဘဲ ရှိတယ် လို့မြင်တယ်၊
ကိုယ့်ဖားရေတွင်း ကနေပြီး ကမ်ဘစင် မြှင့် ပေါ်တက်ပြီး သူများ နိုင်ငံတွေက ဘာလုပ် နေကြသလဲ? ဘာကြောင့် လဲ? ဆိုတာ သိဘို့လို တယ်၊ စိတ်ရှိ တိုင်း၊ သံသယရှိတိုင်း၊ ပြော နေလို့ မ ပြီး ပါ၊
ကိုယ့်အကျိုး မထိခိုက်အောင် ထပ်လောင်း ပြီး နားစွင့်စူးစမ်း ရမှာ လို့မြင် ပါ တယ်၊
စာရှူသူပရိသတ် မျက်စိပွင့် ပြီး ဗဟုသုတရအောင် အောက်ပါ သတင်း များ ကို တင်လိုက်ပါတယ်၊
နိုင်ငံတကာ နိုင်ငံ ခြား ငွေစက်ကူ အလုံးစုံကို လက်တွေ့ကျကျ ဇယားနဲ့ ချပြ ပြီး သုတေသန ပြု လေ့လာ တာ ဘယ်လို ပြောသလဲ?……
Archive for the ‘Chinese Yuan (RMB)’ Category
Is the Chinese Yuan the Most Reliable Forex Trade?
Jun. 2nd 2011
Over the last six years, the appreciation of the Chinese Yuan has been as reliable asaclock. Since 2005, when China tweaked the Yuan-Dollar peg, it has risen by 28%, which works out to 4.5% per year. If you subtract out the two year period from 2008-2010 during which the Yuan was frozen in place, the appreciation has been closer to 7% per year. There is no other currency that I know of whose performance has been so consistently solid, and best of all, risk-free!
ဖီလိပိုင် နိုင်ငံတော် ဘဏ် ချုပ် ကဘာ ပြော သလဲ? Asia’s Central Banks အာရှ နိုင်ငံတော် အစိုးရ ဘဏ်တွေက ဘာကို လို လား နေကြသလဲ?
Asia’s Central Banks Want to Add Yuan to Foreign Reserves, Tetangco Says
Asia’s central banks want to diversify their growing foreign-exchange reserves into yuan- denominated debt issued by China’s government, according to Bangko Sentral ng Pilipinas Governor Amando Tetangco.
Tetangco, who met with People’s Bank of China as part of an economic road show, said Asian central banks have agreed to “look for new avenues for diversification,” according to an e- mailed statement from the Philippine Department of Finance. “Given, however, the traditional investment constraints of central banks, I suggest that the Chinese government may consider issuing more yuan-denominated bonds,” he was quoted as saying.
Premier Wen Jiabao is seeking to promote use of the yuan as an alternative to the dollar in global trade and investment, while avoidingabuildup of speculative capital. Cross-border transactions in the yuan totaled $58.7 billion in 2010, 13 times the amountayear earlier, Xinhua News Agency reported April 1, citing the State Administration of Foreign Exchange.
Tetangco’s “comments are ground-breaking as this is the first time thataregional central bank openly stated the intention of emerging Asia to diversify foreign-exchange reserves into yuan-denominated assets,” said Dariusz Kowalczyk,aHong Kong-based economist at Credit Agricole CIB. “This isacoup for China, which has been working hard to internationalize its currency.”
The yuan slid 0.1 percent to 6.5448 per dollar as of 1 p.m. in Shanghai, extending yesterday’s retreat froma17-year high of 6.5350 reached April 8, according to the China Foreign Exchange Trade System. It has strengthened 0.8 percent this year, while the Dollar Index,agauge of the greenback’s strength, has dropped 4.9 percent and yesterday recorded its lowest close since December 2009.
Central banks in Hong Kong and Thailand have won approval to invest in China’s interbank bond market this year.
The Hong Kong Monetary Authority can invest up to 15 billion yuan, Chief Executive Norman Chan said Jan. 26. The Bank of Thailand can buy as much as 200 million yuan of debt denominated in China’s currency and will use its own assets rather than the nation’s foreign-exchange reserves to finance purchases, Chairman Chatumongol Sonakul said Feb. 24.
Malaysia, which imposed capital controls after the 1998 Asian Financial Crisis, will see increasing use of the yuan in trade with China, while keeping the dollar as its key reserve currency, Prime Minister Najib Razak said in an interview in March. The country eased regulations last August to allow exporters and imports to use the ringgit and other currencies to settle trade with foreign companies.
Bursa Malaysia Derivatives Bhd., which sets the global benchmark for crude palm oil, started accepting yuan as margin collateral for trading in November.
To contact the reporter on this story: Karl Lester M. Yap in Manila at kyap5@bloomberg.net Fion Li in Hong Kong at fli59@bloomberg.net
ကမ်ဘ ဘဏ်ကရော ဘာတွေပြော နေ လဲ? ဘာတွေ လုပ်နေလဲ?
World Bank issues bond denominated in Chinese yuan
The World Bank has issued its first bond denominated in the Chinese currency, joiningasmall but fast-growing market.
The yuan-denominated bond is being issued to promote the use of the Chinese currency in international markets.
It will raise 500m yuan ($76m; £49m).
Other bodies, including the Asian Development Bank, and firms such as McDonald’s and Caterpillar have issued yuan bonds.
China’s stake in the World Bank, which gives financial and technical assistance to developing countries, is set to increase.
It could eventually see China as the third-largest stakeholder in the lender after the US and Japan.
Doris Herrera-Pol, the global head of capital markets at the World Bank, said: “This isalandmark transaction for the World Bank as it is the first World Bank issuance in RMB (yuan), and signals the strong interest of the World Bank in supporting the development of the RMB market.”
The market in Hong Kong for yuan-denominated bonds started just over three years ago.
In September last year, the Chinese government itself started issuing bonds in its currency, also known as the renminbi, there.
Hong Kong, although part of China, hasawell-developed and more open financial market and isaconduit between China and the capitalist developed world.
Africa မှာ လူဦးရေအများဆုံးရှိတဲ့ Nigeria နိုင်ငံ ကရော ဘာလုပ်နေလဲ?
Russia, Turkey, South Africa, Citigroup တို့လဲ ဘယ်လို လဲ?
Nigeria adds Chinese yuan to tradeable currencies
Nigerian trade with China rising
* Follows similar moves in Russia, Turkey
* Will enable Nigerian banks to offer yuan accounts
(Adds background, details, comment from banker)
LAGOS, Jan5(Reuters) – Nigeria’s central bank said on Wednesday it had added the Chinese yuan toalist of currencies that can be used for trade settlement in the domestic foreign exchange market as trade flows with Beijing increase.
China is encouraging countries to use the yuan for trade settlement and diversify bilateral trade away from the dollar.
Aroundathird of Nigeria’s imports come from Asia, most of them from China, according to the central bank.
“We have issuedacircular to the banks permitting them to trade in yuan … China is one of the fastest-growing economies and Nigeria’s trade relations with China are increasing,” central bank spokesman Mohammed Abdullahi said.
Data for 2009, the latest available, show Asian imports into sub-Saharan Africa’s second-largest economy rose 6.6 percent over the year while imports from Western nations declined 4.4 percent, reflecting its shifting trade pattern.
The volume of yuan trading in Nigeria is initially expected to be very low but it is seen as an important symbolic move.
Russia’s MICEX exchange launched yuan-rouble trading in December, and in October, Turkish Prime Minister Tayyip Erdogan said China and Turkey had agreed to use the lira and the yuan in bilateral merchandise trade.
Nigeria’s move will enable lenders in Africa’s most populous nation to offer yuan accounts to their customers.
“Our imports are highly skewed toward China,” said one forex banker in Nigeria’s commercial capital Lagos.
“I was doing an analysis of our transfers and I found out that about 70 percent of our overseas funds transfers are to China,” he said, asking not to be named.
South Africa’s Standard Bank has started offering customers across the continent yuan bank accounts for trade with China, saying they will help customers to reduce their exposure to fluctuations in the U.S. dollar. [ID:nLDE69J106]
Citigroup, the third-largest U.S bank by assets, said last month it had opened nine China desks in Africa to help its Chinese clients navigate the continent. [ID:nLDE6B71RT]
Nigeria’s central bank said the addition of the yuan brought the number of tradeable currencies in Nigeria to 13, including the U.S. dollar, Euro, British Pound and Japanese Yen.
(For more Reuters Africa coverage and to have your say on the top issues, visit: af.reuters.com/ ) (Editing by Nick Tattersall and Susan Fenton)
Nigerian နဲ့ပတ် သက် တဲ့ link ကျန်ရစ်ခဲ့
Link for Nigerian article from Reuters
ငွေးကြေး ရံပုံငွေထိန်း ကျွမ်းကျင်သူ ပုဂ်ဂိုလ် ကမေး၊
အာရှ ထုတ်ကုန် ပစ်စည်း ကို အချင်းချင်းကုန်သွယ် ရာမှာ
အာရှ နိုင်ငံသုံး ငွေစက်ကူ နဲ့ ဖလှယ် သင့်တယ်၊ မှုတ်ဖူးလား လို့ မေး တယ်၊
2009 က ထဲ က တရုပ် နိုင် ငံ နဲ့ Malaysia ၊ တရုပ် နိုင် ငံ နဲ့ Indonesia တို့ အဲဒီလို ဖလှယ် နေတာ တွေ့နိုင်
Asian commodities should deal in Asian currency?
…..Should not an Asian crop for Asian consumer be traded more in Asian currencies?
There are some palm olein (cooking oil) traded in yuan in China’s domestic market but CPO imports in China are largely in US dollars.
Perhaps it is no coincidence then that China recently set up bilateral currency swap with six nations for trade purposes, with Indonesia (100 billion yuan) and Malaysia (80 billion yuan) among the first to be included (so that we can use yuan instead of US dollars to trade with China).
Maybe forastart, Malaysia palm oil exports to China (which accounts for about 25% of Malaysia CPO exports or about RM10.6bil per year) can be transacted and settled in yuan.
The straight forward yuan-ringgit (or yuan-rupiah) transaction meansaChina trader no longer need to convert from yuan to US dollars to buy CPO; and foraseller to convert the US dollars back to ringgit or rupiah – that will immediately save on currency conversion costs for both parties.
One of the implications for such yuan transactions is that it sets the yuan on the path to beamajor trading currency among some Asian countries.
The increasing usage of yuan may eventually lead to more countries using yuan for trade purposes; maybe even holding as reserve currency once China open the yuan up to be internationally tradeable, both of which bode well for the strength of the yuan in the long run.
The present global financial crisis and recession has seen China and Asia economies coping better than the West. This is positive in the longer term for the yuan and other Asia currencies compared to the US dollars, especially with the US printing more money to get out of this financial crisis.
With the likely prospects ofaweak US dollar, Asia palm oil exporters would certainly preferamore stable, if notastrengthening, currency such as the yuan…..
Wall Street Journal မှ သတင်း
ယွန်း ငွေကို US မှာ ဝယ်ယူရောင်းချ နိုင်ပြီ၊
New York နဲ့ Los Angeles မြို့များ မှာ ဘဏ် ခွဲ များ ဖွင့်ထား
Yuan Now Tradeable in the US.9Months,2Weeks ago
New Move to Make YuanaGlobal Currency
China has launched trading in its currency in the U.S. for the first time, an explicit endorsement by Beijing of the fast-growing market in the yuan andasignificant step in the country’s plan to foster global trading in its currency.
“We’re preparing for the day when renminbi becomes fully convertible,” Li Xiaojing, general manager of Bank of China’s New York branch, told The Wall Street Journal. He said the bank’s goal is to become “the renminbi clearing center in America.”
Bank of China’s move comes atatime of U.S. pressure on China to let its currency rise in value. America has blamed an unfairly valued yuan for exacerbating the U.S. trade deficit with China. But the preparations for convertibility are alsoasign of Chinese strength, as China, now the world’s second-largest national economy, recognizes that asaglobal power it must haveaglobal currency. In time,aglobally traded yuan could emerge asastore of value on par with the dollar, euro and yen.
The decision comes ahead of next week’s visit to Washington by Chinese President Hu Jintao, when China’s exchange-rate policies are expected to once again be in the spotlight.
The loosening of restrictions on trading yuan started in Hong Kong,aformer British colony under Chinese sovereignty but with its own legal and financial systems. Anyone withaHong Kong yuan account is now able to trade the currency. Bank of China’s move could further open up the currency to trading and attract Chinese companies with offices in the U.S.
Bank of China’s move to open trading of the yuan in the U.S. underscores Beijing’s growing openness to currency liberalization.
“This is making yuan more accessible to individuals and corporations,” says Robert Sinche, global head of foreign-exchange strategy at RBS Securities in Stamford, Conn. “But China hasalong way to go before it hasafully convertible currency, and this is an inching step forward.”
Chinese regulators last month increased the number of exporters that can use the yuan to settle international transactions fromafew hundred to nearly 70,000. Some analysts have predicted that it will be onlyafew years before 20% to 30% of China’s $2.3 trillion in imports could be conducted in yuan rather than dollars. Today, less than 1% is done in yuan, according to London’s Standard Chartered Bank. While offshore yuan trading has grown rapidly, it’s stillafraction of the $4 trillion daily trading in currency markets world-wide and pales next to trading in the dollar, yen, euro and other currencies.
[boc0111] Bloomberg News
Some skeptics say growth could be curtailed by new regulations announced by the Hong Kong Monetary Authority last month, which puts restrictions on banks’ ability to offer yuan-related products in Hong Kong. Analysts say the regulations reflect China’s interest in keeping speculators from betting on the yuan’s movement and potentially causing disruptions to its economy.
What Beijing is interested in, analysts say, is measured growth in yuan trading. Some experts caution that China could still back track. Nevertheless, some industry observers have called yuan trading outside mainland Chinaagame-changer, as it is one step in allowing the yuan to ultimately float freely. For now, the offshore market acts asaparallel market and doesn’t affect the official rate for the yuan set by Beijing.
Bank of China officials say the bank will take into account both the onshore and the offshore yuan trading when setting the exchange rate of the currency for its customers in the U.S.. To trade yuan in the U.S. through Bank of China,acorporation or individual would need to openayuan account with one of the bank’s branches in New York or Los Angeles.
An obstacle to the growth of the business, at least for now, isalack of demand for the currency among American businesses, which by and large still use the dollar to settle cross-border transactions. McDonald’s Corp. and Caterpillar Inc. recently became the first U.S. non-financial companies to sell debt priced in yuan in Hong Kong.
Potential users of the yuan could be attracted to what some might see asasure bet, since China has said it will continue to allow its currency to appreciate. However, there’s still risk given the uncertainty over the pace of appreciation of the currency. Also, banks tend to charge relatively high service fees on yuan accounts.
Mr. Li said the yuan business is “one of the top priorities” for Bank of China’s U.S. operations. “We see bright future for the business,” he said. The bank’s Hong Kong subsidiary has been the sole clearing bank of renminbi banking business in Hong Kong for the past seven years.
The yuan strengthened 3.3% against the dollar last year, as Beijing loosened its peg to the dollar during the summer amid increasing pressures from the U.S. and other trading partners to let its currency appreciate. The yuan’s gains stalled after the Group of 20 meeting of the world major economies in November but have resumed as President Hu’s visit to the U.S. approaches.
တရုပ်ပြည်၊ India, UK, Israel တိုင်း ပြည် များတွင် ဘဏ်ခွဲများရှီပြီး၊ အမေရိကန် ပြည် မှာဘဏ် ခွဲ ၂၆ ခု ရှိတဲ့ Silicon Valley Bank ဘဏ်ကြီးကလဲ ယွန်းငွေ အရောင်းအဝယ် လုပ် ပေး တယ်
Silicon Valley Bank Adds Offshore Chinese Renminbi Services
SANTA CLARA, Calif. – March 22, 2011 — Silicon Valley Bank (SVB), the premier commercial bank for companies in the technology, life science, venture capital and premium wine industries, announced the addition of offshore Renminbi to its tradable currencies at SVB’s Foreign Exchange Trading Desk. In addition, SVB announced the launch of its offshore Renminbi Multi-Currency Account, adding to the growing list of currencies in which such services are available. These new services enable SVB’s multi-national clientele to consolidate funds and settle international trade for goods and services in Renminbi when conducting business inside and outside mainland China.
“Technology companies are often global at an early stage and require the ability to move money across borders seamlessly and to minimize foreign exchange risk,” said Sanjay Mody, Head of Global Transaction Banking for Silicon Valley Bank. “Our new offshore Renminbi services will give our clients doing business in Chinaacompetitive advantage when it comes to setting prices and settling transactions in local currency.”
SVB’s Multi-Currency Accounts are foreign currency deposit accounts held at SVB that are FDIC insured and subject to U.S. regulatory requirements. SVB’s new offshore Renminbi capabilities complement SVB’s full suite of global treasury services, through which clients can transact in 140 countries and more than 50 currencies.
Today, SVB’s clients can trade in offshore Renminbi and virtually all other freely traded currencies as well as most emerging market currencies on the global inter-bank market.
SVB takesapersonalized and consultative approach to global treasury management for its clients. Throughalarge variety of foreign exchange services and deposit accounts, SVB helps clients protect the value of their foreign currency revenues, control the cost of their foreign currency payments, minimize the translational impact on their balance sheets and mitigate the risk on company’s earnings due to conversion of foreign currency cash flow.
အမေရိကန် နိုင်ငံက ဘတ်ဂျက် ရံပုံငွေ ဆင့်ခါ ဆင့်ခါ အနုတ် လက်ခဏာ ပြ ကာ၊ (စစ်ပွဲများခင်းကျင်းဘို့) နှစ်စဉ် ပိုမို သုံး စွဲ လျက်ရှိ ရာ၊
အမေရိကန်ဒေါ်လာငွေ သန်းပေါင်း နှစ်သန်း (၂,၀၀၀,၀၀၀ သန်း) ကို ကိုင်ဆောင် ထား သူ တရုပ်နိုင်ငံ အစိုးရက စိုးရိမ်မကင်း ဖြစ်လာ လို့၊
လွန်ခဲ့ တဲ့ နှစ် လ (မတ်လ ၂၀၀၉) က စ ပြီး ညည်းတွား တိုင်တယ် လာ တယ်၊
ဒေါ်လာငွေ တခု ကိုသာ အရမ်းမူတည် အားကိုးတဲ့ အန်တရယ် ကို မြင်လာ တယ်၊
ယင်း ဒေါ်လာ က ငွေ တန်ဘိုးကျ ရင်၊ လွန်စွာမှ နစ်နာဆုံးရှုံး လိမ့်မယ် လို့ သဘောပေါက်တယ်၊ (ဖားတုလို့ခ ရုခုန် တာနဲ့တခြားစီပါ)
ဒေါ်လာငွေ တ မျိုး တည်း အစား က ကြီးမှူးကွပ်ကဲ တဲ့ ကမ်ဘ အများသုံး ထိပ်သီး ငွေစက်ကူ လက်တဆုပ် စာ – “ငွေစက်ကူ ချင်းတောင်း” ကိုသုံးစွဲဘို့အကြံပြုလာ တယ်၊
၂၀၀၉ ခုနှစ် မေလ ထုတ် နာမည် ကျော် Bloomberg’s Businessweek စီးပွါးရေး စာစောင် မှ
China May 26, 2009, 12:01AM EST
China’s Yuan: The Next Reserve Currency?
Skeptics have dismissed Beijing’s talk of de-emphasizing the U.S. dollar, but China is making moves that could soon lead toaconvertible yuan
Are the Chinese finally getting serious about loosening their ties to the dollar—and even replacing the greenback with the yuan as the global economy’s reserve currency? The evidence is mounting that they are.
For the last two months, China’s leadership has been complaining about the country’s dangerous dependence on the dollar. Beijing holds $2 trillion in dollar assets, accumulated through years of exports to America and massive purchases of Treasuries by the Chinese government. If Washington can’t rein in its mounting budget deficit, both Treasuries and the greenback could weaken considerably—and the Chinese could be big losers asaresult.
The Chinese began generating attention on the issue in March, when Chinese Premier Wen Jiabao said he was worried that the country’s dollar assets could slide. Ten days later Chinese central bank chief Zhou Xiaochuan suggested replacing the dollar as the international reserve currency. One idea, Zhou said, was to replace the dollar withabasket of currencies supervised by the International Monetary Fund.
Free Convertibility for the Yuan?
Skeptics said the Chinese were merely talking. The dollar is too entrenched as the international currency of choice, with the U.S. by far the world’s largest economy, went the thinking. And in any case, the Chinese act so deliberately that, even if they did wish to elevate the yuan globally, they wouldn’t do it in the short or medium term. Finally, if the Chinese were to bring the yuan into competition with the dollar asamedium of international trade, they would have to turn the yuan intoaconvertible currency whose value would be dictated by the market, with traders, investors, governments, and companies around the world freely buying and selling it. Suchaloss of control, said many Western investors, would never be allowed by the authoritarian Chinese. It would mean lowering all kinds of financial trade barriers, allowing foreign access to Chinese securities markets and more. No way.
Now some observers are changing their tune. China’s financial moves during the last two months have persuaded Western experts that the nation’s leadership intends to make the yuan freely convertible into other currencies—the first big step toward open confrontation with the dollar—withinafew years.
Why have perceptions started to change? Last month, Beijing completed the last ofaseries of so-called currency swaps—providing yuan to other central banks for use in trade with China—with Argentina, Hong Kong, Indonesia, Malaysia, South Korea, and others. These arrangements theoretically removed any need for these trading partners to use the dollar as an intermediary currency in dealing with China. Last week, Beijing denominatedabilateral trade deal with Brazil in the two countries’ currencies, rather than in dollars; the value of the agreement was not specified. The value of the other agreements comes to $95 billion. By way of comparison, U.S.-Chinese trade amounted to $333 billion in 2008. ….
ကျေးဇူးတင်ပါတယ်…..Kyaemon ခင်ဗျာ ဒါဆိုကျနော်တို့အရှေ့တောင်အာရှနိုင်ငံတွေ
နောင်တချိန်မှာ ဒေါ်လာ အစားယွမ်ငွေအသုံးပြုလာမယ်လို့ထင်ပါသလါး…ခင်ဗျာ
ကိုရင်မောင်က မေး ….
နောင်တချိန်မှာ ဒေါ်လာ အစားယွမ်ငွေအသုံးပြုလာမယ်လို့ထင်ပါသလါး…ခင်ဗျာ”
ကျနော်က ပါရဂူ လဲ မဟုတ် ပုရောဟိတ် လဲ မဟုတ် ပါ၊ သို့သော် အ ထက် ဖော် ပြ ပါ သတင်း ဆောင်း ပါးများမှ ပါရဂူများ ရဲ့ ရေးသား ချက် ကို မူတည် ပြီး ခန့်မှန်း လို့ရ ပါတယ်လေ၊
အ ထူးသဖြင့် အောက်ပါ သတင်း ဆောင်း ပါး နှစ်ခု ကိုအာရုံ ပြု ပြီး စဉ်း စား ပါ၊ အဖြေက “လယ်ပေါ်မှာ ဆင်သွား သလို” ထင်ရှား စွာ မြင်ပါလိမ့်မယ်၊
မိန်းမတွက်နည်းပေါ့ ဗျာ၊သူများကလာပြီးဖြီးဖြန်းလို့ လဲမရပါ၊ တနည်း အားဖြင့် ပြောရမယ်ဆိုရင် သူများ ကိုဆရာတင် ပြီး အားကိုး နေဘို့မလို၊ အ ထင်ကြီး နေဘို့ လဲ မလို တော့ ပါ၊
Asian commodities should deal in Asian currency
….Perhaps it is no coincidence then that China recently set up bilateral currency swap with six nations for trade purposes, with Indonesia (100 billion yuan) and Malaysia (80 billion yuan) among the first to be included (so that we can use yuan instead of US dollars to trade with China).
The increasing usage of yuan may eventually lead to more countries using yuan for trade purposes; maybe even holding as reserve currency once China open the yuan up to be internationally tradable, both of which bode well for the strength of the yuan in the long run.
With the likely prospects ofaweak US dollar, Asia palm oil exporters would certainly preferamore stable, if notastrengthening, currency such as the yuan….
….Tetangco’s “comments are ground-breaking as this is the first time thataregional central bank openly stated the intention of emerging Asia to diversify foreign-exchange reserves into yuan-denominated assets,” said Dariusz Kowalczyk,aHong Kong-based economist at Credit Agricole CIB. “This isacoup for China, which has been working hard to internationalize its currency.” …
အမေရိကန် က QE2 တွင် ငွေ စက်ကူ တွေကို 1.25 trillion (1,250, 000 million) အရမ်း ရိုက်နှိပ် ခဲ့၊ QE3 ဆိုပြီး ထပ်မံ ရိုက်နှိပ် ဘို့လဲ စဉ်းစား ခဲ့ တာ ရယ်၊ trillions ကုဌေ ကု ဋာ နဲ့ချီပြီး နှစ်စဉ် ဘတ်ဂျက် အသုံး လွန်နေ တာ ရယ်
ကို ကြည့် ရင်
ASEAN နိုင်ငံ တို့ တွင် ယွန်း ငွေ ကို အခြေခံပြီး ကုန်သွယ် ကြ မှာ အနှေးအမြန်ပါဘဲ၊ (အချို့နိုင်ငံ ကြီးံ တော် တော် များများ နဲ့တောင်လုပ်နေကြပြီဘဲ)
မေး။။။။ တရုတ်ကြီး လာမဲ့ ဆယ်စုနှစ်များအတွင်း ကမ္ဘာ့စူပါပါဝါနိုင်ငံ အဖြစ်သို့ အမေရိကန်နိုင်ငံနဲ့ အပြိုင်ဖြစ်လာမယ် ထင်ပါသလား။
ဖြေ။။။။။ ဆယ်စုနှစ်များ မပြောနဲ့ လာမဲ့ရာစုနှစ်မှာတောင် မဖြစ်နိုင်သေးပါဘူး။ တရုတ်ကြီး အံ့မခန်း တိုးတက်နေတာ ဟုတ်ပေမဲ့ အဲဒီတိုးတက်မှုများကို ဆောင်ကျဉ်းပေးနေတာ အမေရိကန်နဲ့ အနောက်နိုင်ငံများ ဖြစ်ပါတယ်။ တရုတ်နိုင်ငံဟာ တိုင်းပြည်အရ အရမ်းချမ်းသာပေမဲ့ လူတဦးချင်းဝင်ငွေ၊ လူနေမှုအဆင့်အတန်း စတာတွေမှာ ဖွံ့ဖြိုးဆဲနိုင်ငံ အဆင့်သာရှိပါသေးတယ်။ လက်ရှိချမ်းသာမှုရဲ့ နှစ်ဆဖြစ်သွားအုံး သူမွေးထားတဲ့ သန်းတထောင့်သုံးရာကျော်လူများ အဆင့်မှီမှီ နေရဖို့ မဖြစ်နိုင်သေးပါဘူး။ နိုင်ငံရေးအရ အခုအချိန်မှာ ငြိမ်သက်အေးချမ်းနေပေမဲ့ အရှေ့အလယ်ပိုင်း၊ အာဖရိကမြောက်ပိုင်းနိုင်ငံများမှာ ဖြစ်ခဲ့၊ ဖြစ်နေဆဲ လူထုအုံကြွမှုများက အာဏာရှင်များရဲ့ ဗဟိုချုပ်ကိုင်နိုင်စွမ်းအပေါ် များစွာ သံသယဖြစ်စေပါတယ်။ သတင်းမီဒီယာ ပြန်ကြားရေးကို အတင်းပိတ်ဆို့ထားလို့သာ သတင်းစီးဆင်းမှု ပြတ်တောက်ပြီး အခြေအနေမှန်ကို မသိနိုင်တာ အများကြီးဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ဒီတော့ တရုတ်ကြီးကို ဆယ်စုနှစ်ပေါင်းများစွာ လက်ရှိနှုန်းထားနဲ့ မမောနိုင်မပန်းနိုင် ခရီးဆက်နေမယ်ဆိုရင် ယုံကြည်လွန်းရာ ကြပါမယ်။ ဂျပန်နိုင်ငံလည်း ဒုတိယကမ္ဘာစစ်အပြီး စီးပွားရေး တဟုန်ထိုး တက်လာလိုက်တာ ကမ္ဘာ့ဒုတိယ စီးပွားရေးအကြီးဆုံးနိုင်ငံဖြစ်လာပြီး ၁၉၈၀နှစ်များမှာဆိုရင် အမေရိကန်မီဒီယာများက ရင်တမမနဲ့ စောင့်ကြည့်အကဲဖြတ်ခဲ့ရတယ်။ ကိုရီးယားလည်း ဒီအတိုင်းပဲ၊ တရုတ်နဲ့ ဂျပန်ကို ထောက်ထားဖို့ အမေရိကန်က မြှောက်ပေးလိုက်တာ အရမ်းကြီးပွားသွားပြီး အခုဆိုရင် နှစ်နိုင်ငံစလုံးရဲ့ စီးပွားရေးတိုးတက်မှု တန့်နေရပါတယ်။ တရုတ်ကြီးရော ဘယ်လောက်ထိ ပြေးနိုင်မလဲ။ တယောက်ထဲပြေးရင် ကိစ္စမရှိပေမဲ့ အများနဲ့ပြိုင်ပြေးတဲ့အခါ ခြေထိုးသူများ၊ တံတောင်နဲ့တွတ်သူများ၊ နောက်မှ လှမ်းဆွဲသူများ၊ ပြေးလမ်းရှေ့ ပိတ်ထားသူ များစွာရှိတယ်။
ပထဝီနိုင်ငံရေးအရဆိုရင်လည်း တရုတ်ကြီးမှာ ရန်ဖြစ်ခဲ့ဖူးသူ (အိန္ဒိယ၊ ဗီယက်နမ်၊ ရုရှား) နဲ့ စိတ်မချရတဲ့ မိတ်ဆွေနိုင်ငံများ (မြန်မာ၊ ထိုင်း၊ အီရန်၊ ဆိုဗီယက်နိုင်ငံဟောင်းတချို့) နယ်နမိတ်ခြင်းထိစပ် ပတ်လည်ဝိုင်းနေတယ်။ ထိုင်ဝမ်ဆိုရင် သမားရိုးကျ စစ်လက်နက် စွမ်းအားမှာ တရုတ်နဲ့ ယှဉ်နိုင်တယ်။ ဟောင်ကောင်ကျွန်းကျတော့လည်း ကူမြူနစ်ပါတီ ဩဇာအပြည့်အဝ မလွှမ်းဘူး။ အနီးနားက တခုတည်းသော မဟာမိတ် မြောက်ကိုရီးယားကလည်း အချိန်မရွေး ပြိုကွဲသွားနိုင်တယ်။ ဂျပန်၊ ထိုင်း၊ တောင်ကိုရီးယားတို့မှာ အမေရိကန် စစ်အခြေစိုက် စခန်းများရှိတယ်။ ပစိဖိတ်သမုဒ္ဒရာထဲမှာ အမှတ်၇ အမေရိကန်ရေတပ်မတော်ရှိတယ်။ တတိုက်ထဲက ဩစတေလျ၊ နယူဇီလန်တို့ကလည်း အနောက်တိုင်းသားတွေ။ ဒီကြားထဲ အင်္ဂလိပ်၊ ပြင်သစ်စတဲ့ နိုင်ငံကြီးများရဲ့ ဒေသတွင်း ဩဇာကလည်း မသေးဘူး။ ပြည်တွင်းမှာလည်း တိဘက်လှုပ်ရှားမှု၊ ရှင်ကျန်းဒေသ မူစလင်ခွဲထွက်ရေးပြသနာ၊ လူ့အခွင့်ရေး တောင်းဆိုမှု၊ ဆင်းရဲချမ်းသာ ကွာဟလာမှု၊ အလုပ်လက်မဲ့ပြသနာ၊ အာဏာပိုင်များရဲ့ အကျင့်ပျက်ခြစားမှု၊ မေ့မရနိုင်တဲ့ ၁၉၈၉ တိန်အိမင်အရေးအခင်း၊ အခြားခြားသော စတာစတာတွေ ထည့်တွက်ကြည့်လိုက်ရင် တရုတ်ကြီး ငရုတ်သီး အဟုတ်တီး ပြုတ်သတည်း ဖြစ်သွားနိုင်တာကို ထည့်တွက်ဖို့ မမေ့သင့်ဘူးထင်ပါတယ်။
ိုကြောင်ကြီး က ပြော ” ….အခြားခြားသော စတာစတာတွေ ထည့်တွက်ကြည့်လိုက်ရင် တရုတ်ကြီး ငရုတ်သီး အဟုတ်တီး ပြုတ်သတည်း ဖြစ်သွားနိုင်တာကို ထည့်တွက်ဖို့ မမေ့သင့်ဘူးထင်ပါတယ်။ ”
သူဆိုလိုတာက ယင်းအချက်တွေကို ထဲ့တွက်ရင် “ASEAN နိုင်ငံ တို့ တွင် ယွန်း ငွေ ကို အခြေခံပြီး ကုန်သွယ် ကြ မှာ” က ဘယ်တော့ခါမှ မဖြစ်နိုင်ပါ။
တရုပ် ကြီးမှာ အတွင်းရန်ရော အပြင်ရန်ရော၊ ပဋိပက်ခ မျိုးစုံ၊ မတည်ငြိမ်မှု မျိုးစုံတွေနဲ့ ဝိုင်းဝန်း ခြံရံ ပြီး၊ ဒုက်ခတွေ ပင်လယ်ဝေ နေတယ်၊ အချိန်မရွေးပင် ပေါက်ကွဲ ပြီး၊ ပြုတ်ကျ နိုင်လိမ့်မယ်လို့ သူက ရေရေလည်လည် စာပန်းချီ ချယ်သ ထားတယ်၊
သူပြောတာက ဟုတ်ပါ့မလားလို့ သံသယ အများကြီး ဖြစ်မိ ပါတယ်လေ၊
သူပြောတာကို ဟုတ်တယ် လို့ထားအုံး၊ သူပြော တဲ့အချက်တွေကို ထဲ့တွက် အုံး၊
ကျနော်ရဲ့တင်ပြချက်က သိပ်လွဲမယ်လို့ မ ထင်ပါဘူး လို့ ထပ်လောင်း ပြီး ပြော လို ပါတယ်၊
စဉ်း စားကြည့် လေ၊
အမေရိကန် က 1,250,000 million ဒေါ် လာ ငွေ စက်ကူ တွေ ကို အကြီးအကျယ် ရိုက်နှိပ် ခဲ့ တာ၊ ထပ်မံ ရိုက်နှိပ် ဘို့လဲ စဉ်းစား ခဲ့ တာ၊ trillions ကုဌေ ကု ဋာ နဲ့ချီပြီး နှစ်စဉ် ဘတ်ဂျက် အသုံး လွန်နေတာကြောင့်၊ ဘယ် နိင်ငံက ရေ ရှည်ခံနိုင် ပါ့မလဲ၊
နိုင်ငံခြား သို့ကုန်ပစ်စည်း တင်ပို့တဲ့ မြန်မာ ကုန်သည် လုပ်ငန်းရှင် တွေ ကို ဖြစ်စေ၊ ဒေါ်လာ နှုန်း ကြောင့် ပိက်လိုက် ရ တဲ့ လှိုင်သာယာ စက် ရုံ များ က အလုပ် သူမ တွေ ကို ဖြစ်စေ၊ မြန်မာ သင်းဘော်သား တွေ ကို ဖြစ်စေ၊ စသည် စသည် တို့ကိုမေး ကြည့်နိုင် တယ် မှုတ် လား
ငွေတန်ဘိုး တည် ငြိမ်ပြီး ငွေတန်ဘိုးကို ထိန်း သိမ်း နိုင် တဲ့ ငွေ စက်ကူ ကို အနှေး နဲ့အမြန် ပြောင်းလဲ သုံး စွဲ မှာ က သ ဘာ ဝ ပါ ဘဲ၊
ဒီအကြားမှာ ယွန်းငွေစက်ကူက တန်ဘိုးထပ်တက်စရာ ရှိမယ်လို့ ယူဆကြလို့ ပိုလို့တာ တွန်းအားရှိမှာ မှုတ်လား၊
ရှေ့ပိုင်းတွင် တင်ပြထားတဲ့ သတင်းကို ကြည့်ပါ၊ ဖီလစ်ပိုင် နိုင်ငံတော် ဘဏ်ချုပ်က ASEAN မ က လို့ ASIA အာရှ နိုင်ငံတော် ဘဏ်များကပင် ယွန်းငွေကို ကိုင်ဆောင်ရောင်းဝယ် ဘို့ လိုလား ကြတယ် လို့ထွက်ဆို ခဲ့တယ် မှုတ် လား၊
ကြုံလို့ပြောရမယ် ဆိုရင်၊ လစ်ဗျား အာဏာ ရှင် ဂါဒါဖီ က လစ်ဗျား နိုင်ငံ ပိုင် ဘီလီယံ တန် Franc ဖရန့် ပြင်သစ်ငွေ များကို ပြင်သစ် နိုင်ငံတော်ဘဏ်မှာမထားတော့ဘဲ တရုပ် ယွန်းငွေ အဖြစ်သို့ပြောင်းလဲမယ်လို့ သတင်းရတာနဲ့ ပြင်သစ်သမတ Sakozy က မကြည်တော့ ပါ၊
ဒီအချိန် မှာပင် အာရေဗျ အရေးတော်ပုံ ဖြစ်ပေါ်လာ တုံး မို့ Sakozy က အခွင့်ကောင်း ယူပြီး လစ်ဗျား အ စိုး ရ ကို ဆန့်ကျင် တဲ့အုပ်စု နဲ့ပူးပေါင်း ကာ၊ ဂါဒါဖီ ကို ဖြုတ်ချဘို့ ဦးဆောင် ဦးရွက် လုပ်တော့ တာဘဲ လို့ AsiaTimes ရဲ့နိုင်ငံရေး လေ့လာသူပါရဂူ Brazil ဘရာဇယ် အမျိုးသား Pepe Escobar က ရေးသား ခဲ့ သေး၊
ပြိုင်ဆိုင်တာတို့၊ အန်တုတာတို့ထက် ငွေစက်ကူ ဖောင်းပွတာကို စိုးရိမ် ကြတာကို လမ်းကြောင်း လွှဲ အာရုံ လွှဲ ဘို့မ သင လျော် ပါ၊
ကိုယ့် ရွာ သား ပြည်သူ အကျိုး ကို ကြည့်ပြီး အရှိ အတိုင်း ဇစ်မြစ်အကြောင်းရင်း ဖြစ်ပေါ်လာပုံ အတိုင်း ရေးသင့် ကြောင်းပါ၊
လွယ်လွယ် လေး ပါ၊
ကြောင် ကြီး က စွမ်းဆောင်နိုင်ရင် ပေါက်ရောက်ရင် ပြောတာနော်၊
်၊အမေရိကန် နိုင်ငံရဲ့ တန်ခိုး အာဏာ ဩဇာ လွှမ်း မိုးမှု ကို ဆက်လက်ပြီး ထိန်းသိမ်းရအောင၊် ” ဒေါ်လာ ငွေစက်ကူ ကို ကြည့် လုပ်ပါ ဗျား၊ နှစ်စဉ် Trilllon “တရီလီယံ” (သန်း ပေါ် သန်း ဆင့် ၁,၀၀၀,၀၀၀ သန်း) နဲ့ ချီ ပြီး အ ပို မသုံးပါ နဲ့ လို့”….
သက်ဆိုင်ရာ မိမိရဲ့ မိတ်ဆွေ ဆရာ ကြီးများရှိရင် ပြောပေး ပါ လား ဗျို့၊
ကျေးဇူးတင်လိုက်ကြ မှာ ဖြစ်ခြင်း၊
အ နောက်နိုင်ငံတွေကို အထင် ကြီးပြီး အပြစ်အနာစာ တွေ ကို မျက်စိမှိတ် မျက်ကွယ် ပြု ကာ ရေး တာ မျိုး ကို အမေရိကန် ပြည်သူ က လည်ကောင်း၊ အမေရိကန် အစိုးရ က လည်ကောင်း၊ မ လို လား မ တောင်း ဆို ကြ ပါ၊
အကြောင်း မှာ လက်ရှိ ငွေကြေး ပြသနာ ကို ပွင့်လင်းစွာ ရင်ဆိုင် ဆွေးနွေး ပြီး အဖြေရှာ ဘို့လက် ကိုင်ပြု ထား လို့ဘဲ
Ryan: Medicare is going bankrupt
Bernanke to Occupy Wall Street: ‘I get it’
November 2, 2011 | 2:14 pm
တ ရုပ်ကြီး ပြို ကျ တာ ထက် လောလော လတ်လတ် EU တို့ အမေကန်တို့ ပြိုကျနိုင်တယ်လို့ ပညာရှင်၊ နိုင်ငံ ခေါင်းဆောင်များက ရင်တ မ မ နဲ့စိုးရိမ်နေကြ ပြိမှုတ် လား၊
ကြောင် ကြီး က အထင်သေး တဲ့ တရုပ်ကြီးကိုမှ ငွေ အမြောက်အ မြား ချေး ယူဘို့ အ ရင်ဆုံး ဦးတည် ပြီး EU အ ဖွဲ့ တဖွဲ့ကပင် သွားခဲ့တယ် မှုတ်လား၊ တ ရုပ်ကြီးက အသေး စိတ်ပြမှချေးမယ် ပြောတော့
ချေးငွေ မရလိုက်သေး ဖြစ်ကာ ငွေချေးဘို့ဂျပန်သို့ဆက်လက် ပြီး ခရီးထွက်ခဲ့တယ်လေ၊
“ကိုယ့်မျက်ချီးကို မမြင် သူများမျက်ချီး ကိုယ်ရယ်ချင်” သလိုပါဘဲ၊
ကိုယ့်ကိုယ်ကို အရင်သန့်စင် ဆေးကြောဘို့ မြတ်စွာဘုရားက သွန်သင်ဆုံးမ တာကို သွားပြီး သတိရ မိတယ်လေ၊
ဖြေ။။။။။ ဆယ်စုနှစ်များ မပြောနဲ့ လာမဲ့ရာစုနှစ်မှာတောင် မဖြစ်နိုင်သေးပါဘူး။
လာမဲ့ “ရာစုနှစ်” မှာတောင် မဖြစ်နိုင်သေးပါဘူး… ဆိုတာ ဟုတ်မှဟုတ်ရဲ့လား၊
သူပြော တာ နဲ့ အောက်ပါပညာ ရှင် တွေ ပြော တာနဲ့ “မိုးနဲ့မြေ” လို ကွာခြား နေပါလား၊
“တရုပ်ကြီးက အမေရိကန်ကို စီးပွါးရေး နယ်ပယ်မှာ၂ နှစ်အတွင်း ကျော်တက် နိုင် တယ်လို့” ၂၀၁၀ ခုနှစ် ကထဲကထင်ကြေးပေး၊
China could overtake U.S. as the world’s economic powerhouse within two years, says think tank
Last updated at 9:13 AM on 11th November 2010
China could overtake US as world’s economic powerhouse within2years | Mail Online
ကမ်ဘာ့ ငွေရေးကြေးရေး အဖွဲ့ IMF က ၂၀၁၆ ခုနှစ်တွင် တရုပ်ကြီးက အမေရိကန်ကို ကျော် တက် လိမ့်မယ် လို့ ခန့်မှန်း တယ်လို့ဆိုပါလား
IMF Forecast: Can China Really Overtake the U.S. Economy by 2016? – Money Morning
UK ဂါဒီယန်း သတင်စာ ကြီး က လဲ ဒီ အတိုင်း ဆိုဘဲ
2016: when China overtakes the US | Mark Weisbrot | Comment is free | guardian.co.uk
Mail Online link က မထွက်လာလို့ ထပ်ပို့ထား၊ မရရင်browser မှာတင်ကြည့်ပါ၊
လွှတ်တော် အမတ် က အရေးတကြီး သတိပေး
Ron Paul 2011 – Urgent Warning About The Economy And The Dollar Collapse
Ron Paul 2011 – Urgent Warning About The Economy And The Dollar Collapse – YouTube
Uploaded by bankonfood on Oct 12, 2011
ကာကွယ်ရေး စရိတ် ကြီးလွန်း
Ron Paul “Now We Live Off Our Military Power” – YouTube
တရုပ်ကြီးက အမေရိကန်ကို စီးပွါးရေး နယ်ပယ်မှာ ဘယ်တော့ခါ မှာကျော် တက်မလဲ? Al Jazeera English မေး
When will China’s economy overtake America’s? – Opinion – Al Jazeera English
၂၀၁၆ လို့ IMF ကပြော ၊၂၀၁၄ လို့ UC Davis Feenstra ကပြော၊ ၂၀၁၀ ကပင်ကျော်တက်ခဲ့ ပြီးပြီလို့ Peterson Institute Arvind ကပြော
Is China poised to surpass the United States to become the world’s largest economy? The International Monetary Fund recently predicted that the size of China’s economy would overtake that of the US in terms of purchasing power parity (PPP) by 2016.
But China would surpass the US inarelatively short period of time even if we measured both countries’ economies in nominal terms. Assuming that the Chinese and US economies grow, respectively, by eight per cent and three per cent in real terms, that China’s inflation rate is 3.6 per cent and America’s is two per cent (the averages of the past decade), and that the renminbi appreciates against the dollar by three per cent per year (the average of the past six years). China would become the world’s largest economy by 2021. By that time, both countries’ GDP will be about $24 trillion, perhaps triple the size of the third largest economy, either Japan or Germany.
When Will China Overtake the U.S. Economically? – Seeking Alpha
ဒီနေ့ ရာဟူးသတင်းမှာ ဖတ်လိုက်ရတာတော့ တရုတ်သန်းကြွယ်သူဌေး (ယွမ် ၁၀သန်း သို့မဟုတ် ဒေါ်လာ ၁.၆သန်း) တဝက်နီးပါးက အမေရိကန် ကနေဒါကို အများဆုံး ပြောင်းပြေးဖို့ စဉ်းစားနေကြဆိုပဲ။ အဲဒါ ကြောင်ကြီးလို တရုတ် ရယ်ဒီမိတ် ခေါက်ဆွဲပြုတ်မေ့ပြီး အနောက်တိုင်း fast food ကို အထင်ကြီးနေသူက ပြောတာဟုတ်ဖူးနော်။ Bank of China နဲ့ ကြေးကြီးသတင်းစာ Hurun သတင်းစဉ် တို့ပေါင်းလုပ်တဲ့ စစ်တမ်းက ပြောတာ။ နောက်ထပ် ၁၄ရာခိုင်နှုန်းကတော့ ပြောင်းရွှေ့ဖို့ လုပ်တောင် လုပ်နေကြပြီတဲ့။ ဒီတော့ စုစုပေါင်းဆိုရင် (၄၆% + ၁၄%) ၆၀%သော တရုတ်ပြည်ရဲ့ အချမ်းသာဆုံးများသည် အနောက်တိုင်းကို အထင်ကြီးသူများလို့ ပြောလို့ရတယ်။ ဂုဏ်ယူပါတယ် ကြောင်ကြီးမှာ သူဌေးအဖော်တွေ အများကြီးရှိလို့။ သူတို့ ပြောင်းချင်တဲ့ အကြောင်းက ခလေးတွေအတွက် ပညာရေးကောင်းဖို့နဲ့ တရုတ်ပြည်မှာရှိတဲ့ ပိုင်ဆိုင်မှုတွေကို စိတ်မချလို့ပါတဲ့။ စစ်တမ်းဖြေဆိုသူ သုံးပုံတပုံဟာ ပြည်ပမှာ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများ ပြုလုပ်ထားပြီး အလွယ်တကူ နိုင်ငံခြားကို ပြောင်းရွှေ့ထွက်ခွာနိုင်တယ်။ အချို့သောတိုင်းပြည်များက နိုင်ငံခြားသားတွေ အလုံးအရင်းနဲ့ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများ ပြုလုပ်ရင် အမြဲတမ်းနေထိုင်ခွင့် ပေးပါတယ်။
ငွေဖောင်းပွမှုနှုန်းမြင့်မားခြင်းနဲ့ ပင်လယ်ရပ်ခြားမှာ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံဖို့ ခက်ခဲခြင်းတို့ကိုလည်း စစ်တမ်းမှာ မှတ်တမ်းတင်ထားတယ်။ လူတချို့ဟာ တိုင်းပြည်စီးပွားရေး နှစ်သုံးဆယ်ကျော်ကြာ တိုးတက်လာမှုကြောင့် အလွန်အမင်း ချမ်းသာလာတယ်။
ကမ္ဘာတလွှား စီးပွားရေးကျနေပေမဲ့ တရုတ်ပြည်မှာ ဘီလျံနာ ၂၇၁ဦးရှိပြီး မနှစ်ကတော့ ၁၈၉ဦးသာရှိတယ်။ ယွမ်၁၀သန်းချမ်းသာသူ ၉၆၀၀၀၀ ရှိပြီး မနှစ်ကထက် ၉.၇% ပိုလာတယ်။ တိုင်းပြည်ရဲ့ အချမ်းသာဆုံး သူဌေးအများအပြားဟာ ဆောက်လုပ်ရေး၊ အိမ်မြေဈေးကွက် တို့အပြင် ပြည်တွင်း လက်လီအရောင်းဈေးကွက်တို့မှနေ ကြွယ်ဝချမ်းသာလာတယ်။ ဒါပေမဲ့ အစိုးရချုပ်ကိုင်တဲ့ ပညာရေးစနစ်၊ မြင့်တက်လာနေတဲ့ လူနေမှုစရိတ်နဲ့ ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့် ဖြစ်နေတဲ့ အကျင့်ပျက်ခြစားမှုများကြောင့် လူအများဟာ ပြည်ပကို ထွက်ခွာချင်နေကြတယ်။
မှတ်ချက်။။။ အီးလို ဖတ်ဖို့အခက်အခဲရှိသူများအတွက် ဗဟုသုတ အလို့ငှာ ဘာသာပြန်ပေးလိုက်သည်။
ဒီတော့ဗျာ တရုတ်ပြည် ချမ်းသာကြွယ်ဝလာတာ ငြင်းစရာမရှိပါဘူး။ သို့ပေမဲ့ အချမ်းသာဆုံး လူတွေတောင် ပြေးဖို့စဉ်းစားနေမှတော့ …ကိုယ့်ဖာသာကိုယ်ပဲ ဆက်တွေးကြည့်ပါတော့ဗျာ။ ကျနော် မက်ဒေါ်နယ် ဟမ်ဘာဂါနဲ့ ကိုကာကိုလာ ညစာစားလိုက်အုံးမယ်။ ခေါက်ဆွဲပြုတ်တော့ မစားတာ ကြာပြီဆိုတော့ လွမ်းတော့လွမ်းသဗျာ။ (နောက်တာပါ အိမ်မှာ ခေါက်ဆွဲပြုတ် ဖာလိုက်ဆောင်ထားပါတယ်)။ မြန်မာပြည်မှာ တရုတ်တွေ ပြောလိုက်ရင် ပြည်ကြီးပြည်ကြီးနဲ့ အရမ်းအမျိုးချစ်ကြတယ်။ ဒါပေမဲ့ နိုင်ငံခြားကို ဖော်ဂွတ်ဆိုပြီး အပြီးလည်းထွက်ရော အားလုံး အမေရိကန်ကိုရောက်ကုန်တယ်။ ဘာရယ်မဟုတ်ဘူး၊ ကြားဖူးတာလေး မိတ်ဖြစ်ဆွေဖြစ် အစာပိတ် ဝေမျှတာပါ။ ဒီကွန်းမန့်က သီးသန့်ပို့စ်တင်ရင် ပွိုင့်၄၀ရ ရမှာ အခုတော့ ပြန်ပြောချင်တာနဲ့ ၂ပွိုင့်တန် ဖြစ်သွားပြီ
Nearly half of China’s wealthiest citizens are considering emigrating, with the United States and Canada the most popular destinations, according toanew report from the authors of China’s rich list.
China now has 271 dollar billionaires, according to Hurun’s 2011 rich list, up from 189 last year, despite the global economic crisis.
Many of the country’s wealthiest citizens have made their money in China’s construction and property sectors, as well asagrowing domestic retail market.
The world ran out of trust in 2008 — but there is no shortage of money because the Fed is printing like mad. It’s the wrong approach, with potentially dire consequences, says James Grant.
…… “Tell us, Mr. Bernanke,”acongressman might consider asking him, “if you had the choice, would you hold dollars? And may I remind you, Mr. Chairman, that you are under oath?”
ငွေစက်ကူ ကိုအရူးပမာ ဒလကြမ်းရိုက်တာကို မေးခွန်းထုတ်၊
Mr. Bernanke ရယ်
ခင်ဗျားသာ ရွေးခွင့်ရရင် ခင်ဗျားကိုယ်တိုင်က ဒေါ်လာငွေစက်ကူတွေကို ဆောင်ထား ပါ့မလားလို့
ိုတရုပ် Yuan ယွန်း ငွေစက်ကူများ ရောင်းဝယ် ဖလှယ်တဲ့
ကမ်ဘာ့ ဦးစီးဋ္ဌာနကြီးဖြစ်လာအောင် လန်ဒန်မြို့ အတွက်
စီမံကိန်းတွေကို အကောင်အထည်ဖော်နေကြ ပြီ
အာရှနိုင်ငံများနဲ့ ဥရောပနိုင်ငံများအကြား ကုန်သွယ်ရင်းနှီးမြုပ်နှံကြ တဲ့
ငွေကြေးကိစ်စ အ ဝ ဝ ကိုဆောင်ရွက်ကြဘို့
လန်ဒန်မြို့ ဟာ အံဝင်ဂွင်ကျ တဲ့ ဝင်ထွက်ရာ “ဂိတ်တခါး”ကြီး ဖြစ်တယ်
လို့ ယူကေ ဘဏ်ဋာရေးဝန်ကြီး George Osborne ကပြောတယ်၊
ယင်းလုပ်ဆောင်ချက်တွေကြောင့်လန်ဒန်မြို့အတွက် “ပေါင်စတာလင်း” ငွေ
“သန်းပေါင်း ထောင်ချီပြီး” ရလာမယ်လို့ဘဏ်အကြီးအကဲတွေက မြင်တယ်၊
ယင်းအတွက် ယူကေ ဘဏ်ဋာ ရေးဝန်ကြီး George Osborne က ဟောင်ကောင်မြို့သို့
London seeks major role in yuan trading
The chancellor hopes that the City of London can winaslug of this international business and augment it”
A recent report by the Chatham House think tank forecast that trade transactions settled in the currency would reach aroundatrillion dollars (£650bn) by 2020.
ဆိုတာကို တော်တော်လေး အင်တိုက်အားတိုက် ပြောနေတာထက်ကို
အောင်မာ…တရုတ်နို့မှုန့်စား ကြီးလာလို့ ကျပ်မပြည့်တဲ့အကောင်ကများ Aပေးတဲ့တရုတ်ကို စော်စော်ကားကား။ နင်စားလာတဲ့ နှို့မှုန့်က ဖွဲမှုန့်နှစ်ဆ နို့မှုန့်တဆ ဖော်စပ်ထားတဲ့ တရုတ်ဖော်မြူလာအစစ်နဲ့ သူ့အမေလင် စက်ရုံကထုတ်တာ။ ဒီလိုမှန်းသိ နို့မှုန့်ဆိုတဲ့အမှုန့်ထဲမှာ အဆိပ်မှုန့် ထည့်ခိုင်းပါတယ်။ နင်တို့တိုင်းပြည်ကို သနားလို့ ဘယ်သူမှ မဝယ်တဲ့ အစုတ်ပလုပ်တွေ စွန့်ပေးနေတာ။ ကျောက်စိမ်း၊ ပတ္တမြား၊ သစ်တော၊ သဘာဝဓာတ်ငွေ့တွေ မက်လို့မထင်နဲ့။ သောက်ရေးထဲ သောက်ရာပေါ်နေဒယ်..ဗမာငွေဈေးတက်လို့ စိတ်ညစ်နေရထဲဂျားထဲ…။ ဒီနှစ် အရင်နှစ်ကလို ဆယ်ဆမြတ်ပါ့အုံးမလား မသိဘူး။ အနောက်နိုင်ငံတွေနဲ့ ဂျပန်ကုမ္မဏီတွေကလည်း ဝင်လာဂျတော့မယ်။ ကယ်ဂျဘာအုံး အရပ်ဂဒို့…။
ခုတော့လဲ တစိမ်းတွေလိုပါဘဲလား ဂျက်ကီချီးပေရာ။
အင်း စိတ်လျှော့ပါကွယ်။သူများတွေ စိတ်အနှောင့်အယှက်
ဖြစ်သကွယ်။ဟီးး……..ခုမှတွေ့ လို့ 
“ဂျက်ကီချီးပေ” ရဲ့ကွန်မန့် မှာ ပုဂ်ဂိုလ်ရေး ဆဲ တဲ့စကား တွေပါနေတယ်
အမျိုးသမီးတွေ ကလေးတွေ မကြား ဝံ့ မနာသာတွေ ပါ
စည်းကမ်း အရ ရွာမှ ထုတ်ပယ်ဘို့ မလိုဘူးလား?
တော်တော်ကြာ တယောက်ပြီးတယောက် အပြန်အလှန်
ဆဲနေတဲ့ ဖော်ရမ် ဖြစ်နေ အုံးမယ်၊
စာထဲက ပါလာတဲ့ သတင်းကို မကြိုက်တာနဲ့ စာပို့ လုလင် ကို
ကြိုက်တာမကြိုက်တာ အ ပ ထား
ကမ်ဘာ့ စီးပွါးရေး သတင်း ကိုသိဘို့လို
အယ်ဒီတာ့အာဘော်မှာ အရင်နှစ်တွေက… ရေးဖူးတယ်..။
Idiom Definitions for ‘Don’t shoot the messenger’
This phrase can be used when breaking some bad news to someone and you don’t want to be blamed for the news. (‘Don’t kill the messenger‘ is also used.)
ဒါပေမဲလို့စာကြောင်းလိုင်း “တားပစ်တာ” က “ဖျက်ပစ်တယ်” လို့ဆိုနိုင်မလား၊
UK ယူကေ ဘဏ်ဋာရေး ဝန်ကြီး ရဲ့ “ဂိတ်တခါး” အယူအဆ မှာလေးနက်၏ ပညာအမြော်အမြင်ပါ၏၊
စင်ကာပူမြို့လဲ “ဂိတ်တခါး” အနေအထားနဲ့ကြီးပွါး၏၊
တောင်တွေနဲ့ပိတ် နေတဲ့Nepal နီပေါနိုင်ငံကလဲ ကိုယ့်တိုင်းပြည်ကြီးပွါးဘို့”ဂိတ်တံခါးလို” လုပ်ချင်၏၊
New Mexico နယူးမက်စီကို ပြည် နယ် Arizona အာရီဇုနား တက်ကသိုလ် စီးပွါးရေး ပါမောက်ခ
နီပေါ် အမေရိကန်ဖြစ်သူ ဒေါက်တာ Alok Bohara ရဲ့အလားတူ “ဂိတ်တခါး” အယူအဆတွေကို
A Tri-lateral Trans-Himalayan Economic Cooperation Agreement By Alok K. Bohara, PhD
A Tri-lateral Trans-Himalayan Economic Cooperation Agreement By Alok K. Bohara, PhD | The Mandalay Gazette-Myanmar/Burma News Media Forum Network
ကောက် နုတ်ချက် များ
For suchavision, we need to make sure our regional politics are tied to our economic development strategies and that we can promote interests that are mutually beneficial for all parties involved. To that end, Nepal needs to persuade its two neighbours to signatri-lateral agreement – the Trans-Himalayan Economic Cooperative Agreement (THECA).
Nepalis are aware of the rising economic prowess of China and India at the world stage, and we also love to talk about our strategic location. But in order to translate our rhetoric into reality, we need to haveastrategic vision, followed byaset of doable policies.
The key is to buildasense of trust among ourselves by being respectful of each other’s national sensibilities. Nepal cannot afford to use the China versus India card as pendulum diplomacy to suit their domestic political game plan.
မှန်ပါတယ် ကိုရင်မောင်.. တရုတ်(ထီး)မကောင်း တရုတ်၊ တရုတ်(မ)ကောင်း တရုတ်၊ ကျောသားရင်သား ခွဲခြားရပါမယ်။ ဘယ်လိုခွဲမလဲ ဟုတ်စ… စဉ်းစားကြည့်ပေါ့ကွာ၊ ကိုယ်တိုင်ဆို ဘယ်ဟာကိုရွေးမလဲလို့…။
ဒါပေမဲ့ ဒီကောင်တွေ အကျင့်မကောင်းဘူး သူတို့ကောင်းစားရင် သူများနစ်နာမှကျေနပ်တဲ့အကောင်တွေ
အမေရိကန်ဒေါ်လာ မတည်ငြိမ်မှူကြောင့် ဒေါ်လာကိုမသုံးတော့ဘဲ
မိမိတို့နိုင်ငံငွေစက်ကူ များ နဲ့ဘဲ ကုန်သွယ် ဖလှယ် ကြဘို့
ဂျပန်ဝန်ကြီးချုပ်နိုဒါ က အိန်ဒိယ ဝန်ကြီးချုပ် နဲ့စာချုပ်
28 December 2011 Last updated at 22:23 ET
“Amid global economic uncertainties, ensuring the stability of the financial markets is all the more important for the stable economic development of the two countries,” Japanese prime minister Yoshihiko Noda and Indian prime minister Manmohan Singh said inajoint statement after their meeting in New Delhi….
အလားတူ မိမိတို့နိုင်ငံငွေစက်ကူ များကိုအသုံးပြု ပြီး ကုန်သွယ် ကြဘို့ ဂျပန်ဝန်ကြီးချုပ်က တရုပ်ဝန်ကြီးချုပ် နဲ့စာချုပ်
(ဒေါ်လာ ၃၃၉ ဘီလီယံ (၃၃၉၀၀၀ သန်း) ကုန်သွယ် မှု ပမာဏ ရှိ နိုင်ကြောင်း)
China and Japan plan direct currency exchange agreement
It is the latest step by China as it seeksamore global role for the yuan.
“Given the huge size of the trade volume between Asia’s two biggest economies, this agreement is much more significant than any other pacts China has signed with other nations,” Ren Xianfang of IHS Global Insight was quoted as saying by the Bloomberg news agency.
China is Japan’s biggest trading partner. According to the Japan External Trade Organization, trade between the two countries stood at 26.5tn yen ($339bn; £218bn) in 2010.
The plans were announced duringavisit to China by Japan’s Prime Minister Yoshihiko Noda and afterameeting with Chinese Premier Wen Jiabao. ….
“This should encourage Japanese private investment into Chinese bonds, as well as into other Asian emerging currencies”
Takuji Okubo Societe Generale
Reuters ရိုက်တား မှ ၂၀၁၂ ဖေဖော်ဝါရီ ၁၇ သတင်း
ငွေစက်ကူ များကို တိုက်ရိုက်လဲလှယ်ဘို့
ဒီ (Feb 17) အပတ်ကုန်လောက် မှာ ရောက်မယ်
Japan, China to promote yen-yuan currency exchange -Nikkei
TOKYO | Fri Feb 17, 2012 1:18am EST
UK ယူကေ၊ စင်ကာပူ၊ ထိုင်ဝမ် လဲ ယင်း ငွေဖလှယ်တာပေါ်
ဝန်ဆောင်ပေးရင်း ဝန်ဆောင်ခ အကျိုးအမြတ်ရဘို့
Feb 17 (Reuters) – China and Japan will begin work this month to promote the direct exchange of their currencies as trade between their two countries grows, the Nikkei newspaper reported on Friday.
The bulk of trade between the world’s second-largest and third-largest economies is currently settled in dollars, due in large part to financial regulations and market custom.
But more direct exchange of the yen and the yuan would lower currency risks and settlement costs, and two governments agreed in December to take steps to facilitate such trade.
Nikkei saidabilateral working committee will look at encouraging investment in banking systems, boosting the number of foreign exchange dealers, as well as review regulations and consider setting up an offshore yuan trading center in the Tokyo foreign exchange market.
Japanese Finance Minister Jun Azumi will visit China on the weekend to discuss bilateral financial cooperation and Europe’s debt crisis. China has become Japan’s biggest export destination and No.1 trading partner, taking over the United States.
The gradual relaxation on the use of the yuan in international transactions has led to an increase of Chinese trade now being settled in yuan.
Other countries including Britain, Singapore and Taipei are seekingashare of the growing offshore yuan business, while Chinese authorities push on withaseries of initiatives to internationalise the currency.
The committee, which will first meet in China, will be comprised of officials from Japan’s Finance Ministry, the Financial Services Agency, the Bank of Japan and China’s central bank, the newspaper
နိုင်ဂျီးရီးယား က ဘာလုပ်နေလဲ? ဘာကြောင့်လဲ?
အာဖရိက တိုက်မှာ အကြီးဆုံးရီနံထုတ်ပြီး အချမ်းသာဆုံးနိုင်ငံဖြစ်တဲ့ နိုင်ဂျီးရီးယားနိုင်ငံဟာ
နိုင်ငံခြာ၊ငွေ ရံပုံငွေတွေ စုစုပေါင်းမှာ ဒေါ်လာ ၃၂ ဘီလီယံ (၃၂၀၀၀ သန်း)
ထိုငွေတွေရဲ့၇၉% ဟာ အမေရိကန်ဒေါ်လာငွေတွေဖြစ်ကြတယ်၊
ကျန်တာတွေက ယူရို၊ ယူကေ ပေါင်စတာလင်၊ စွစ် ဖရန့် စသည်တွေဖြစ်ကြတာ၊
အဲဒီ နိုင်ငံခြားရံပုံငွေတွေထဲက ၁၀% ကို တရုပ်ယွန်းငွေစက်ကူဘက်ကို ပြောင်းလဲကိုင်ဆောင်နိုင်ဘို့
အဆောတလျင်လုပ်မယ်လို့ နိုင်ဂျီးရီးယားနိုင်ငံရဲ့ ဘဏ်ချုပ် Sanusi ကပြော၊
နိုင်ဂျီးရီးယား အပြင် အခြားအာဖရိကနိုင်ငံတွေ Angola, Algeria and South
Africa လဲ လိုက်လံ ပြောင်း လဲဘို့ရှိနိုင်တယ်လဲရေးထားတယ်
Sanusi Says Nigeria Plans to Get Yuan to 10% of Reserves Soon as Possible
By Fion Li and Sophie Leung – Sep 7, 2011 5:40 AM PT
Nigeria plans to reachatarget of holding 10 percent of its foreign-exchange reserves in yuan “as soon as possible,” said central bank Governor Lamido Sanusi.
The nation plans to start holding the Chinese currency next quarter, predicting it will appreciate given the strength of China’s economy, Sanusi said today in an interview in Hong Kong, adding that the target was set more thanayear ago. He said the yuan will “inevitably” becomeareserve currency and that increased convertibility outside China had boosted its appeal.
The $32 billion in Nigerian reserves are now 79 percent held in U.S. dollars, with the rest largely in euros, Swiss francs and British pounds. Asia’s central banks are also diversifying their growing reserves into yuan debt. Philippine Finance Secretary Cesar Purisima said on Sept.3that buying yuan may be “prudent.”
“Confidence in China doesn’t mean lack of confidence in America,” Sanusi said. “Europe and America will continue to be important parts of the world. Having said that, it will be almost living inadream world to ignore China. It’s the second- largest economy in the world and it’s well-managed.”
The yuan,adenomination of the renminbi, was the biggest gainer in August among Asia’s 10 most-used currencies excluding the yen, having advanced 0.9 percent versus the dollar as Standard & Poor’s downgrade of the U.S. credit rating andarout in global equities prompted investors to pull back from riskier assets.
The foreign-currency reserves of Africa’s biggest oil producer slid 11 percent to $32.3 billion in the year to Sept. 2, according to data from the Abuja-based Central Bank of Nigeria. Nigerian benchmark Bonny Light crude gained about 51 percent in the same period. The country relies on crude exports for 95 percent of its foreign-exchange earnings.
Nigeria may accept yuan payment for China’s oil purchases in the country and that could be one of the ways to build up the central bank’s yuan holdings, Sanusi said.
“There’s no reason, based on history, why we cannot for instance receive renminbi for our sales of oil to China,” he said. Bilateral trade between China and Nigeria wasarecord $7.5 billion last year.
“While Nigeria’s current bilateral trade with China is much smaller than its U.S. dollar trade in oil, the China- Nigeria trade numbers are expected to grow in coming years,” Sebastian Spio-Garbrah, managing director of New York-based DaMina Advisors LLP,afrontier-market risk adviser, wrote inareport to clients today.
“Sanusi’s actions underscoreagrowing problem that all central banks in Africa and other major emerging markets will face in the coming years as their trade with China increases,” Spio-Garbrah wrote. “More African countries are expected to follow Nigeria’s lead in coming months — probably Angola, Algeria and South Africa.”……
West Africa Rising: Nigeria shifting currency reserves from dollars to Chinese
Africa’s top oil exporter will convert as much as 10 percent of its foreign cash
reserves to the Chinese yuan as China’s importance asatrade partner grows.
Nigeria, West Africa’s largest economy, is selling US dollars for Chinese yuan.
…But, inasense, Khan says, China has already displaced the dollar in Africa’s
more blighted corners: Guinea, Democratic Republic of Congo, and Sudan. In each,
China, is constructing mammoth infrastructure projects — roads, railways,
ports, stadiums — in return for commodities like cobalt and bauxite.